Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa shaqada ka eryay gudoomiyihii bangiga dhexe kadib markii ay sare u kacday - Wardeeq 24 TV Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa shaqada ka eryay gudoomiyihii bangiga dhexe kadib markii ay sare u kacday Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa shaqada ka eryay gudoomiyihii bangiga dhexe kadib markii...
Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa shaqada ka eryay gudoomiyihii bangiga dhexe kadib markii ay sare u kacday
Madaxweynaha Turkiga ayaa shaqada ka eryay gudoomiyihii bangiga dhexe, kaas oo afartii bilood ee uu xafiiska joogay ku guulaystay amaanta maalgashadayaasha ee dulsaarka dulsaarka iyo balanqaadka siyaasadaha lacagta adag.
Wareegto lagu daabacay faafinta rasmiga ah subaxnimadii hore ee Sabtida, ayuu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ku dhawaaqay inuu ka tagay Naci Agbal, oo ahaa wasiirkii hore ee maaliyada.
Lira ayaa kor u kacday ka dib markii bangiga dhexe ee Turkiga uu kordhiyo dulsaarka
Turkiga ayaa ka baxay heshiiskii haweenka looga ilaalinayay rabshadaha
Turkiga ayaa weydiistay warbaahinta Masar inay xaddidaan dhaleeceynta: milkiilaha kanaalka TV-ga
Midowga Yurub wuxuu joojiyay qorshihii liiska madow loogu qoondeyn lahaa shirkadaha shidaalka ee Turkiga
Waa in lagu beddelaa borofisar ku takhasusay bangiyada oo ku dooday in dulsaarku hooseeyo.
Agbal ayaa loo keenay inuu hogaamiyo bangiga dhexe ka dib markii lacagta Liiraha ee Turkiga ay hoos u dhacday iyo sicir bararka oo cirka isku shareeray. Bilihii uu xafiiska joogay, Agbal wuxuu kor u qaaday heerka cabirka guud ahaan 875 dhibcood, isagoo ka shaqeynayay dib u dhiska kalsoonida bangiga dhexe ka dib markii ay dhaawaceen sannado badan oo siyaasado aan caadi ahayn.
Agbal ee ugu dambeeyay ee dhibcaha 200 khamiistii wuxuu qaatay heerka 19 boqolkiiba, taas oo ka sarreysay falanqeeyayaasha la filayo.
Bangiga ayaa sheegay in siyaasad adag oo lacageed la ilaalin doono ilaa sicir bararka, oo ku dhacay boqolkiiba 15.61, la xakameeyo.
Erdogan wuxuu si cad uga soo horjeedaa dulsaarka sare, asagoo ku andacoonaya in sicir bararka sare uu sababayo sicir barar, kaas oo ka soo horjeeda aragtida guud ee dhaqaalaha
Wuxuu ku cadaadiyay bangiga dhexe inuu hoos u dhigo sicirka shidaalka amaahda iyo koritaanka. Dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in madaxbanaanida bangiga dhexe si xun loogu dhaawacay cadaadis siyaasadeed.
Wareegtada Erdogan Sabtidii ayaa lagu magacaabay Sahap Kavcioglu inuu noqdo madaxa bangiga dhexe ee cusub. Kavcioglu waa borofisar ku takhasusay arrimaha bangiyada isla markaana ah qoraa wax ku qora wargeys dowladda taageera oo uu ku dooday in dulsaarku hooseeyo.
Wuxuu horey u soo noqday siyaasi ka tirsan xisbiga talada haya ee Erdogan.
Previous articleFulkaano ayaa ka qarxday meel 40km (25 mayl) u jirta caasimadda Iceland ee Reykjavik
Next articleQatar: Dib-u-habeynta sharciyada shaqaalaha ayaa ‘wax ka beddelay’ suuqa